JUNE&MAY: July 2015
ကလေးတွေ အကြောင်း ၁၂
ကလေးတွေ ဘယ်အချိန်မှာ အိမ်မက် စမက်တတ်တယ် အိမ်မက် မက်တာ သူတို့ ဘယ်လိုသိတယ်ဆိုတာ
သေချာမသိ မလေ့လာမိဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့ လက သူတို့ အဖေ ခရီးသွား နေတုန်း တစ်မနက် အက်ဝင်ကပြော
လာတယ် မာမီ အက်ဝင် bad dream မက်တယ်တဲ့။ဒယ်ဒီနဲ့ သူနဲ့ အပြင်သွားတာ ဒယ်ဒီ က hole ထဲကျ
သွားလို့ဆိုပြီးလာပြောတော့ အော် အက်ဝင်တောင် အိမ်မက် မက်တတ်နေပြီတော့ လို့ စိတ်ထဲ မှာအမှတ်
သူက ညဏ်ကောင်းတယ် စာကို တစ်ခေါက်လောက်မြင်ရင် မှတ်မိတော့ စာရေးပြီး လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်
ချင်ဘူး ပျင်းတယ်။တရုတ်စာ ဆိုလဲ မကျင့် ချင်ဘူး။အမေ လုပ်သူက အက်ဝင် စာကို သေချာလုပ်မယ်
အင်္ဂလိပ်စာကိုလည်း လက်ရေးလှလှ ရေးမယ်ဆို Samsung pad တစ်လုံး ၀ယ်ပေး မယ်လို့ ပြောထား
တယ်။အဲ့ဒါကို စွဲတယ်ထင်ပါရဲ့ ဒီနေ့ မာမီ အက်ဝင် ညက မာမီ အက်ဝင့်ဖို့ Samsung pad ၀ယ်လာတယ်
လို့ အိမ်မက် မက်တယ်တဲ့။လင်းလင်းကတော့ မမက်တတ်သေးလို့လား မသိ ဘာမှမပြောသေးဘူး။
Posted by JuneOne at 9:18 PM0comments Links to this post
ကလေးတွေ အကြောင်း ၁၁
အမေလုပ်သူ အိမ်ပြန်ရောက်တယ် ဆို ဆီးပြီးပြောတယ် sorry mommy...sorry mummy နဲ့ပြောရင်
သိပေတော့ ရေးခိုင်းထားတဲ့ spelling မပြီးသေးလို့ ပဲ။အမေ ပြန်လာခါ နီးမှ စာအုပ်လေး ဆွဲ ခုံလေးဆွဲထိုင်
ရေးတော့ ဘယ်မှာ ပြီးမလဲ။မပြီးရင် ဆူမှာစိုးလို့ ကြိုပြီး ဆောရီး ပြောထားတာ။အိမ်မှာ ၂ယောက် ဆိုတော့ ၂
မျိုး။စားနေကျ အစာ မဟုတ်ပဲ အသစ်တစ်ခု စမ်းကျွေးရင် တစ်ယောက် က စပြီး မကြိုက် ဘူး ဆိုရင်
နောက် တစ်ယောက်က ကောင်းမှကောင်းပဲ။၏
အကိုလုပ်သူက အမေလုပ်သူ ရဲ့ဖုန်းကို ယူပြီး words search game ဆော့နေရင် မေလင်းလင်း မနာလိုဘူး။
ကိုကိုး လာဆော့မယ်လေ။မြန်မြန် လာနော် စောငိ့နေမယ်နော်။အကိုလုပိသူက တော်တော်နဲ့ မပြီးနိုင်သေး
ရင် ဘေးကနေ ခဏ ခဏ လာပြောနေရော။အကိုလုပ်သူက နားအေးပြီး ရောဆိုပြီး လိုက်မယ်လို့ ဆိုပြီးထ
ဖုန်းလေးကိုင်ပြီး လိုက်သွားရင် ဖုန်းပြန်သွားထား လိုက် ကိုကိုး။ဖုန်းနဲ့ ဆော့လို့မရဘူးဆိုပြီး သွားပြန်ထားခိုင်း
သေးတာ။အကို လုပ်သူက ကုပ်ကုပ်နဲ့ ထွက်လာပြီး ဖုန်းကို ခုံပေါ်ပြန်လာတင်တယ်။အမေလုပ်သူက
မေလင်းလင်းက ဆရာကြီး သားရဲ့ဆိုတော့ အက်ဝင်က ပြုံးစိစိ နဲ့ ဘာမှ မပြောရှာဘူး။ဒါ သူဆော့ချင်လို့။
အကိုလုပ်သူက ဆော့ချင် ပြီး သူက မဆော့ ချင်ဘူး ဆိုရင်တော့ ဘယ်လို ခေါ်ခေါ် မဆော့ဘူးပဲ။
အက်ဝင် က အခုနဲနဲ ကြီးလာတော့ ဆော့လာတယ်။အရင်လို သိပ်မငြိမ်တော့ဘူး။အက်ဝင်က အသံ
ကျယ်သလောက် မေလင်းလင်းက တစ်ခါတစ်လေ ဘာပြောနေမှန်းတောင် မကြားရဘူး။မိန်းကလေး
ပီသတယ် ပြောရမယ်။ဒါပေမယ့် ဒီလို မျောက်ကတော့ ဆော့တတ်တယ်။
သူတို့ ဒယ်ဒီက သူတို့ကို ဆူလေ့ မရှိတော့ သူတို့ ဒယ်ဒီ အသံနဲနဲမျြင့်ပြောရင် စိတ်ဆိုးနေတယ် ထင်ကြတယ်။
သူတို့ရှေ့မှာ လင်မယား ၂ ယောက် စကားအခြေတင်ဖြစ်ဖူးတယ်။အဲ့ဒါဆို သူတို့ကလေးတွေက အဖေလုပ်သူ
လွန်တယ်ပဲ ထင်ကြတယ်။တစ်ရက် သူ့အဖေ ခရီးသွားနေတုန်း ညဖက်ရောက်တော့ မေလင်းကရုတ်တရက်
Mommy, are you happy while daddy not around?အမေလုပ်သူက သူ့မေးခွန်းကို အတော်လေးအံ့အားသင့်ပြီး
why? လို့ပြန်မေးတော့ daddy cant scold you?တဲ့။
အက်ဝင်ကျတော့ တစ်မျိုး အဲ့လို အဖေ လုပ်သူ ခရီးသွားရင် အမေလုပ်သူကို အဖေလုပ်သူက အော်လို့ အမေ
လုပ်သူက အဝေးကို ပို့ ပလိုက်တယ်ထင်နေတာ။အက်ဝင်က အခု P1။မေက K1.
(ထမင်းစားချိန် ရုံးမှာ ရေးသည်။)
Posted by JuneOne at 1:15 PM4comments Links to this post